7 Yar baa laga ogyahay Meelo tagidda Beautiful Si Booqo In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Yar baa laga ogyahay Meelo tagidda Beautiful Si Booqo In Europe
Europe, dalka quruxda badan ee quruxda iyo cirfiid warkii shaki la'aan waa go a in caga waayo, safarka kasta waxaa enthusiast baxay. Iyada oo meelo baraaruga baqeen limitless booqashada, Europe waa yaqaan in ay noqon mid ka mid ah oo qurux badan dibadda xarumaha waxbarasho ee ardayda International sida ay leeyihiin Fadli ah xoomey ee xeebaha, jasiiradaha, daaraheeda waaweyn, Daar wayn, iyo taxadiri taariikhiga ah.
Raacsan magaalooyinka sida Rome iyo Paris waa waajib booqasho magaalooyinka halka iyada oo saaran Europe, laakiin haddii aad tahay mid ka mid ah dadka kuwa caadaysteen in ay sahaminta ku Yar baa laga ogyahay Meelo tagidda Beautiful oo sugi la ounce kasta oo quruxda GEMS qarsoon, liiska taasi waa uun kuu!
Iyadoo qabka yidhi, akhri martay qaawin ah 7 meelaha understated ee Europe in ay yihiin breathtakingly qurux badan iyo kororka doonaa rush in adrenaline aad raadinayso.
1. Yar Meelo tagidda Beautiful yaqaan – Valletta, Malta
Valletta waa mida ugu yar yar oo loo yaqaan Meelo tagidda magaalooyinka Beautiful dunida iyo hoy u tahay guryaha boqorrada, qalcado, iyo cathedrals in taariikhda dib ugu qarnigii 16-ka. magaaladan waxaa gebi ahaanba waa Adduunka Heritage Site sida ay tahay muhiimad weyn ay sabab u tahay oo ka mid ah dareenka taariikhiga qabtay
waxa by. Qaybta ugu fiican oo ku saabsan sahaminta Valletta waa in u Xeelaysanayn agagaarka yahay ma hawl adag oo u samaysaan sida Jasiiradda waa ku filan yar yar in la gabi ahaanba la daboolay on foot. Qaar ka mid ah indhaha ku weyn in marnaba ka maqnaan halka Valletta waa Barrakka Sare Jannooyin iyo Casa Rocca Piccola hantidaan views aad u dhiman doono!
Salzburg waxa uu ku yaalaa on soohdinta reer Germany, dalka Austria iyo waa jecelyahay by weyn ee Eastern Alps in si dhab ah waa hortiisa ah indhaha. Tani yaabka badan oo yar yaqaano magaalada Meelo tagidda Beautiful waa ku dhashay ee Mozart, ka laxamiistaha music caan, kuwaas oo
alaabtii carruurnimada waa sii raagayaan iyo soo bandhigay matxaf. Marka laga reebo in ay muhiimadda taariikhiga ah, Magaalada qurxiyey Baroque naqshadaha magacaabay - an style Xadgudbayaasha ka horrantii qarnigii 17aad oo qaybsamo oo webiga ag Salzach ah, taas oo ka dhigaysa booqanaya magaalada this safarka waqti u ah da'da Dr Makumbe!
Graz in Tareenadu Salzburg
Linz in Tareenadu Salzburg
Maxay ahayd mar magaalo biyoodka, Constanta waa hadda Romania ugu weyn ee saddexaad magaalada oo yar yaqaano Meelo tagidda kale Beautiful in Europe iyo dekedda si aayar aayar ah ku taal bangiga galbeed ee Badda Madow.
Constanta hoy u xaqiijin fara badan goobaha dalxiiska dib toban meelood oo qarnigii, oo ay ku jiraan Square Ovid ah, meesha taallo naxaas ah artist ah Roman a Ovid taagan, iyo ka tanaasushay Constanta Casino, kaas oo kasoo muuqday Architecture-of Art Noveau. Constanta sidaas oo kale ayaa laga yaabaa in ay seashores farxad ugu, halkaas oo aad Doono fursad u hesho in ay cadceedsato iyo dabciyo kor. Xaaladdan oo aad ku sugan tahay adventurous ah niyadda, waxaa jira safarada maalin multi ka Constanta, taas oo ka mid ah booqasho laba Heritage Sites UNESCO kuwaas oo Danube iyo Tulcea oo ay la socdaan nasto dhamaadkii at a caan dalxiis tago xeebta, Mangalia.
4. Yar Meelo tagidda Beautiful yaqaan – Ghent, Belgium
Qarsoon hoos Hoos dhammaan beelaha Belgian more caan ah magaalooyinka sida Antwerp iyo Brussels, Ghent waa jawharad qarsoon ee Belgium. Iyo magaalooyinkeedii oo xiiso leh iyo disorder fog ka yar, Ghent waa ku filan in yar in aad dareentid raaxo iyo ku filan u weyn in dhallaanka aad waayo-aragnimo. Haddii aad jeclaan of matxafyada quruxsan, baararka Casrisan, iyo dhinaca kanaalka views, aad si xaqiiqo ah u baahan doontaa in aad ku darto Ghent in safarka aad faahfaahin. Qayb ka mid ah meelaha aan waajib ahayn in la iska indho tiri waxaa ka mid ah Gravensteen, guri nagaadi qarnigii tobnaad la kanaalada iyo views cajiib ah, ka Belfry of Ghent iyo St Baro Cathedral.
Iska diyaar u ah inay la soo jiitay ee raveled kaabayaasha ayaa istaagay tareen waqtiga oo waxaad ka samaysaa kamaradaha aad WidhWidh for qaado this of yar Meelo tagidda Beautiful ogyahay in Europe.
Brussels si Tareenadu Ghent
Antwerp in Tareenadu Ghent
Halle in Tareenadu Ghent
Bruges in Tareenadu Ghent
Bogosyada ee xuduudaha bari, Helsinki waa magaalo oo Yurub ah in istaahilaa sahaminta. Buuxdhaafsheen hal-abuurnimo, Helsinki ahaa Adduunka naqshadda Capital waayo, 2012. Ay style waa sidaas amaan, isku day in aadan ka dhiiran oo ay ku biiraan strolling booqashooyinka agagaarka magaalada hoose in ay la kulmaan taariikhda hodanka ah ee caasimada Finland.
Tixgeli booqanaya Helsinki inta ay joogto u ah maalmaha xagaaga si kor loogu qaado waqti aad waxaa ama saaray kabaha gutsy iyo diriraan habeenkii jiilaalka blanketed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro weyn oo ka mid ah indhaha si aad u aragto, ma waxaad yeelan doontaa fursad u si buuxda u muujiyo qarsoodiga ah kasta oo heysta!
Gothenburg, ku yaal Sweden, waxay hoy u tahay Liseberg dheeldheel park, mid ka mid ah soo jiidashada sare ee dalka inkastoo isagoo mid ka mid ah Meelo tagidda Beautiful yar baa laga ogyahay. Sidoo kale waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka taas oo ah shisheeya tiimbashada ay sabab u dhamaanshaha dalkii iyo badda iyo kooxa fikradaha sida "" ay (a Fikradaha of riyaaqayaa nasashada kafeega) iyo Feskekorka (Fish kaniisadda) Isku day booqanaya magaalada this ee August si ay markhaati ay iidda music cajiib ah loo yaqaan Jidka Out West. Ma aha suurto gal ah in ay soo booqdaan lagu guda jiro waqti this? magaalada doono habase yeeshee bandhig sida raaxo ah inay dareenno dhan la sceneries qurux badan,
cuntada Dibnaha oo farta, iyo jidadka noole. Si aad u top, imid magaaladii ku wareegsan waxaa la samayn karaa xaq on aad cagta taas oo macnaheedu yahay in uu idiin badbaadiyo on lacagta safarka iyo isku waqti ku raaxaysan ku dhaqmo bulshada iyo dhaqanka magaaladan yaab in uu dalab.
7. Yar Meelo tagidda Beautiful yaqaan – Split, Croatia
Split waa Croatia waa kaamil ka yar baa laga ogyahay Meelo tagidda Beautiful fasax ah haddii aad tahay ayaa ugaarsi ugu dhacdo a mingling magaalada xeebta leh vibes qaboowga Mediterranean. halkan cunnada ay Dalmatian oo ay weheliso ka cuntada badda cusub salaax doonaa dareeme oo aad ka heli on jilbahaaga!
dheeraad ah, nasto ee xeebta Kastelet aad caawin doonaa in aad stress iyo ceshadaan aad tahay isagoo ka gudahood. Haddii aad raadinayso in muddo ah in tacsiyaynta, oo aad qaadi karto masaafo doon ah Halkan ka Hvar, jasiirad ku taalla in ka yar laba saacadood magaalada ka. All oo dhan, Split waa xirmo buuxda aad taas oo shaki waa sahamiyaan!
Sidaas, waa maxay in aad sugaysid? U qorshee safarkaaga soo socda mid ka mid ah duulimaadyadan yar loo yaqaan Beautiful la Save A tareenka wareegsanaa magaalo jecel yahay, oo mar dambe waad na mahad doonaa, safarka Happy!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/lesser-known-beautiful-destinations/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / TR si / fr ama / de iyo in ka badan.
Raaxaysan Trip xadgudubka-Free A: hostel Accommodation
Best Saffarada Day Si Qaado From Berlin
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Jarmalka, safarka Europe
10 Talooyin Ku Joogitaanka Qaabashada Intaad Safarka Ku Jirto